कोरोना संक्रमित बाह्र हजार छ सय चौरासीजना निको – Nepali news portal
कोरोना संक्रमित बाह्र हजार छ सय चौरासीजना निको
७ श्रावण २०७७, बुधबार १६:५९ July 29, 2020 पर्वत डेष्क
काठमाडौं÷नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या १८ हजार ९४ पुगेकोमा १२ हजार ६ सय ८४जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् जसमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ हजार ३७० रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयल गौतमले जानकारी दिएको छ । बितेको २४ घण्टामा थप १०० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । बुधबार गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले १०० जना थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या १८ हजार ९४ पुगेको जानकारी दिए । आज थपिएका संक्रमितमा काठमाडौंका ३ जना रहेका छन् । बुधबार देशका विभिन्न २८ वटा प्रयोगशालाबाट ३ हजार ७ सय ७९ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ । अहिले संक्रमण दर २ देखि ३ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रवक्ता डा. गौतमले बताए ।
अहिले विभिन्न अस्पतलाका आइसोलेसनमा ५ हजार ३ सय ७० जना उपचाररत रहेका छन् । प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा १ सय १९, प्रदेश नम्बर २ मा १ हजार ८ सय ७८, बागमती प्रदेशमा ४ सय २० र गण्डकी प्रदेशमा ३ सय ८९ जना उपचाररत रहेका छन् । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा ३ सय ४५, कर्णाली प्रदेशमा २ सय ९० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ९ सय २७ जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन् ।
बुधबार २० हजार ८ सय ४२ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् । प्रदेश नम्बर १ मा २ हजार ५ सय ५८, प्रदेश नम्बर २ मा २ हजार ३ सय ९७, बागमती प्रदेशमा १ हजार ४ सय ८४ र गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार ३ सय ९ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा ३ हजार २ सय २४, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ३ सय ८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ हजार ५ सय ६२ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् ।
पर्यटकिय महाशिलामा १०८ गौधारा
सहमती खोज्ने ओली प्रचण्ड छलफल निश्कर्षविहिन